Tsangambaton’ny faha-100 taona: vita ny « tribune » an’ny seminera zandriny eny Ambohipo - ewa.mg
News - Tsangambaton’ny faha-100 taona: vita ny « tribune » an’ny seminera zandriny eny Ambohipo
Noraisina vonjimaika. Ni­dina teny
amin’ny kianjan’ny seminera zandriny eny Am­bo­hipo, ny
arsevekan’Antanana­rivo, ny Mgr Razanakolona Odon sy ny filohan’ny
fankalazana ny faha-100 taonan’ny seminera zandriny,
Andriama­nanoro Augustin, afakomaly. Nijery ifotony ny fahavitan’
ny “Tribune” ho an’izao jobily izao izy ireo. Efa mamaramparana ny
asa amin’ny fanaovana izany fotodrafitrasa izany ny orinasa
nisahana ny fanamboarana azy. Nambaran’ny Tale jeneralin’ny
tetika­san’ny filoham-pirenena ta­min’izany fa niainga tamin’ny
hetahetan’ireo seminarista zandriny izao fananganana ny sehatra eo
amin’ny kianja izao.
mpi­ara-miombona antoka rehetra izany. “Io aloha ny bainga
voavadika fa mbola ho avy ny fanatsarana bebe kokoa”, hoy izy.
Nanteriny fa hamaha ny olana amin’ny fahamaroan’ny oloan tonga eny
an-toerana rehefa fotoan-dehibe ny fahavitan’izao fotodrafitrasa
izao. Nanamafy izany ny Mgr Razanakolona Odon, nilaza fa ilaina ny
zavatra maharitra tahaka izao. Tsy mbola hotokanana anefa izany fa
iandrasana ny fotoana avy amin’ny diosezy. “Fandraisana ny asa vita
ara-teknika ny natao”, hoy izy. Mbola hisy ny fanarenana ny kianja
amin’ny herinandro ary hojerena koa ny hanitarana ahazoana toerana
maherin’ny 100 eo amin’ny “Podium” ankoatra ny efa vita.
L’article Tsangambaton’ny faha-100 taona: vita ny « tribune » an’ny seminera zandriny eny Ambohipo a été récupéré chez Newsmada.
Vohilava Mananjary: maro ny fanapotehana ny tontolo iainana
Nidina tany Vohilava, distrikan’i Mananjary andro vitsy lasa izay, ny vaomiera iraisan’ny rafi-panjakana maromaro. Vaomiera nahitana ny avy amin’ny ONE (Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana), ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany, ny Rano sy ny fidiovana, ny Fanajariana ny tany, niaraka amin’ny olom-boafidy. Anton-dian’izy ireo ny fijerena ifotony ny voka-dratsin’ny fitrandrahana volamena ataon’ilay orinasa tsy miankina, izay toherin’ny mponina any an-toerana. Araka ny tatitra, nahatsapa sy nahita tsy fanarahan-dalàna maro ity vaomiera iombonan’ny minisitera ity ary hanaovan’izy ireo tatitra any amin’ny rafitra lehibeny avy, handraisana fanapahan-kevitra hentitra.Navotsotra RalevaAnisan’ny nampitaraina ny mponina ny familian’ilay orinasa ny lalana izoran’ny renirano Isaka, fototry ny rano fisotron’ny mponina, ny fahapotehan’ny fambolena, ny rano maloto nankarary, ny tsy fanajana ny bokin’andraikitra, sns.Ankoatra izany, nohadihadin’ny mpitsara mpanao famotorana, ny 6 oktobra teo, Raleva sy ny namany, mpikambana ao amin’ny Justice et paix, sy ao amin’ny fikambanana fiarahamonim-pirenena OIDESCM. Nahazo fahafahana izy ireo avy eo.Nisy ny fanangonan-tsonia nataon’ny fokonolona sy ny fikambanana maro samihafa, ny 6 oktobra teo, mankasitraka ity fidinana ifotony nataon’ny vaomiera iombonana ity, sy ny famotsorana an-dRaleva sy ny namany. Mbola takin’ny mponina amin’ny fanjakana kosa ny hampiatoan’ilay orinasa tanteraka ny fitrandrahana volamena.Njaka A.L’article Vohilava Mananjary: maro ny fanapotehana ny tontolo iainana a été récupéré chez Newsmada.
Andavamamba: lehilahy iray matin’ny herinaratra teny ambony andrin-jiro
Tsy fantatra mazava na ny mombamomba azy na izay antony niakaran’ity lehilahy iray ity teny ambonin’ilay andrin-jiron’ny Jirama, eny Andavamamba, omaly, ity. Ny zava-nitranga aloha, maty tsy tra-drano, main’ny herinaratra izy. Hatairana ny an’ireo mponina eny amin’ny fokontany Andavamamba, omaly maraina tokony ho tamin’ny 6 ora. Lehilahy iray sahabo ho 30 taona, nihanika ny andrin-jiro mitondra herinaratra mavesatra teny an-toerana. Fotoana fohy taorian’izay, nitselatra ilay andrin-jiro ka maty tsy tra-drano ilay lehilahy. Hatramin’izao, tsy fantatra ny antony nanaovan’io lehilahy ilay fihetsika, tsy mbola hay ihany koa ny mombamomba azy. Ao ireo milaza fa olona avy eny Manarintsoa ny lehilahy. Tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina, efa nihaodihaody teny amin’ny manodidina io lehilahy io, nijerijery andrin-jiro izy. “Nandehaleha teo nijerijery andrin-jiro izy ary noroahin’ilay mpiambina ato aminay. Tsy mamaly fa misiotsioka fotsiny ralehilahy ary nijerijery andrin-jiro hafa”, hoy ny fanazavan’ny mponina iray eny an-toerana. Fotoana fohy taorian’io, efa teny ambony andrin-jiro ilay lehilahy, tsy nisy nahita ny niakarany ary ny fokonolona efa vory nijery azy no nikiaka mafy raha nahita ilay tselatra teo amin’ny “transformateur”. Tamin’izany indrindra, ny akanjony sisa nihazona azy mialoha ny nilatsahany amin’ny tany.Mora tantarainaSarotra, mafy ny niaina sy nahita ny fitrangan’ilay zava-niseho. Rehefa tsy nahazona ilay lehilahy intsony ny akanjony, nilatsaka avy teny ambonin’ilay andrin-jiro izy ary nidaboka mafy tamin’ny tany. “Efa tsy nisy aina intsony ilay lehilahy ary mety mbola misy “courant” ny vatany”, hoy hatrany ny fanazavana. Ankona sy nifampanontany ireo olona raha nahita ilay lehilahy nitsirara amin’ny tany. Tsy nisy sahy nikitika ny vata-mangatsiakany ny mponina fa niandry ireo tompon’andraikitra samihafa naka izany. Taorian’izay, tonga teny an-toerana ny tompon’andraikitry ny Jirama, ny BMH ary ny sampana mpamonjy voina. Ny polisy no efa tonga mialoha teo an-toerana, izy ireo izay nanao ny fanadihadiana. Tapatapaka ny jiro teny amin’ny faritra Anatihazo II nandritra ny tranga, efa nanarina izany ny tompon’andraikitry ny Jirama. Ny vata-mangatsiakan’ilay lehilahy kosa, nalefa eny amin’ny tranom-patin’ny HJRA. “Misy faritra may eo amin’ny tendan’ilay lehilahy ary miforitra ny tanany”, hoy ny fanazavan’ireo tompon’andraikitry ny tranom-ptain’ny hopitaly. Nambarany fa tsy fantatra ny mombamomba ny maty ary tsy mbola tonga teny an-toerana ny fianakaviany. Nohamafisiny fa tsy fantatra raha salama saina na tsia ihany koa izy.Manoloana ny tranga, nanao fanambarana ny Jirama fa mampidi-doza, mahafaty ny fianihana andrin-jiro sy fikasihana ny tariby latsaka amin’ny tany. Nohamafisiny fa ny mpiasan’ny Jirama irery ihany no afaka mikirakira ireny tariby ireny noho izy manana traikefa sy fahaizana ary fitaovana ilaina amin’izany. Manentana ny daholobe ihany koa ny Jirama hampandre azy ireo amin’ny alalan’ny laharana 3547 na mandefa hafatra amin’ny pejy Jirama ofisialy rehefa misy trangana andrin-jiro mianjera na tariby latsaka amin’ny tany. Maneho fiaraha-miory amin’ny fianakavian’ny niharam-boina ihany koa ny Jirama. Henintsoa HaniL’article Andavamamba: lehilahy iray matin’ny herinaratra teny ambony andrin-jiro a été récupéré chez Newsmada.
Filoha Rajoelina tany Iakora: “Hampidirina ho miaramila ireo tanora tsy an’asa…”
Nidina ifotony tany Iakora indray ny filoha Rajoelina Andry, omaly, nitokana ny toby miaramila ho an’ny faritra Ihorombe. Voaresaka tao anatin’izany ny ady atao amin’ny dahalo. “Manomboka izao, hampidirina ho miaramila ireo tanora tsy an’asa any amin’ireo distrika na faritra mena sy tsy misy fandriampahalemana”, hoy izy.Vata-miaramila hatrany amin’ny 80Notsindriny fa hametrahana vata-miaramila hatrany amin’ny 80 ity toby ity ary ho hary fitaovana, angidimby, fiara mifono vy, hatramin’ny fahitalavitra sy vata fampangatsiahana izany. Tsy ho afa-bela ary hatahotra ny dahalo manomboka izao, araka ny nambarany.Nanteriny fa tanjona ny hampihenana ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy. “Tsy misy distrika ho hadino izany intsony…”, hoy izy. Nampanantena ny fitaovana hanamboara-dalana ny filoha, tamin’izany. Notokanana koa ny tranom-pokonolona ary nisy ny fizarana ny hazavana, jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro tany an-toerana.Laharam-pahamehana ny fahasalamana…Mbola notsiahiviny fa laharam-pahamehana ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary koa ny fandriampahalemana. Nisy ny dinikasa notarihin’ny filoha niarahana amin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony any amin’iny faritra Ihorombe iny. Voaresaka ny olana sy ny hetahetan’ny vahoaka any an-toerana, araka ny lahatenin’ny depiote voafidy any an-toerana, toy ny fanamboaran-dalana mirefy 136 km, ny vary mora, sekoly, hopitaly, ny fikambanam-behivavy…Synèse R. L’article Filoha Rajoelina tany Iakora: “Hampidirina ho miaramila ireo tanora tsy an’asa…” a été récupéré chez Newsmada.
L’aspect social du travail du personnel pénitentiaire a été mis à l’honneur. Garant du quotidien des personnes détenues, le personnel pénitentiaire assure à la fois la sécurité et le bien-être social. Ce dernier pouvant se manifester par la prise en charge quotidienne des relations entre les détenus et le monde extérieur, leur réhabilitation ou encore leur éducation. Ce qui place le personnel pénitentiaire au centre de la bonne gestion des prisons, comme l’a fait savoir Nelson Mandela, « l’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de garde, car c’est de son intégrité, de son aptitude personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend la bonne gestion des établissements pénitentiaires. Le rôle des agents pénitentiaires se limite toutefois à celui de sécurité et se réfère souvent au seul métier des éléments des forces de l’ordre », si l’on s’en tient aux dires de Misarimalala Haingotiana, coordinatrice nationale de la lutte contre la détention préventive, abusive, phase 2 auprès d’ACAT Madagascar durant la célébration de la journée internationale Nelson Mandela, vendredi dernier. Une opportunité pour l’ACAT Madagascar et la FIACAT de sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de « promouvoir l’importance particulière du travail social accompli par le personnel pénitentiaire ». Surtout face aux différentes problématiques de l’administration pénitentiaire à Madagascar telle que la surpopulation carcérale. Avec environ 4.000 détenus, le personnel pénitentiaire d’Antanimora est sûr d’avoir du travail aussi bien social que sécuritaire. José BelalahyL’article Personnel pénitentiaire : Un rôle social souvent négligé a été récupéré chez Midi Madagasikara.